Iindawo zokuchopha zendlu yangasese, Sport Brace, Plastic yangasese Lid - Haorui
Phantse iminyaka engama-20, i-HAORUI igcina intsebenziswano yexesha elide kunye nesuphamakethi ephambili ekhokelayo yaseYurophu, njengeLIDL, ALDI, EDEKA, NORMA, NETTO, ROSSMANN njalo njalo. isiqinisekiso. Ngoku i-HAORUI ikakhulu ijongana neqela elikhulu lemveliso-izinto zokuhlambela, ezemidlalo kunye neemveliso zempilo, iithoyi zomthi.
Phumla ubomi bakho
Usuku oluhle luqala apha. Izinto zethu ezahlukeneyo zokuhlambela ziya kwenza indlu yakho yangasese icoceke kwaye ibe lula Izinto ezahlukeneyo kunye noyilo zibonisa ubuntu bakho obukhethekileyo. Usuku oluxakekileyo luphela apha. Umgangatho onokuthenjwa kukuzinikela kwethu okungaguquguqukiyo. Inkangeleko entle kunye nemveliso yokuziva uyiphucula imeko yakho. Nceda phumla ngalo mzuzu.
Londoloza ubomi bakho
Ukusuka kusetyenziso oluqhelekileyo lwemihla ngemihla ukuya kwimidlalo yobungcali kunye nokusetyenziswa kwezonyango, iqela lethu linokunikezela zoyilo ngokusekwe kwiimfuno zakho zokwenyani zemisebenzi eyahlukeneyo kunye nokusebenzisa injongo: Ukhuseleko lwezemidlalo kumalungu omzimba ahlukeneyo, umkhono wobushushu kunye noxinzelelo, ilaphu elisebenzayo kunye nemisonto inikezela umphumo okhethekileyo, unyawo uyakhathala, unyango olubandayo kunye nobushushu, uOthopedics kunye nonyango ... Yenza ukhetho lwakho ngokukhululekileyo, kwaye sikubuyile.
Cebisa ubomi bakho
Izinto zokudlala ezenziwe ngomthi zibonelela abantwana ngesileyiti esingenanto abanokuthi babonise kubo bonke uburharha kunye nokugqithisa kweengcinga zabo ezixineneyo; Iithoyi ezenziwe ngomthi zingakhuthaza ukusebenzisana nabanye abantwana kwaye zikhuthaze ukwabelana kunye nokusebenzisana; Izinto zokudlala ezenziwe ngomthi zikwabonisa unxibelelwano ngqo kwilizwe lendalo labantwana ... Zonke iithoyi zethu ezimibalabala zomthi ngokuqinisekileyo zinokwandisa ubomi bakho nobentsapho yakho.
Nazi izizathu ezimbalwa zokuba ukhethe u-Hebei Haorui
Yenza imisebenzi emitsha kwimisebenzi eyahlukeneyo kunye noyilo olusekwe kwimfuno yokwenyani yomthengi ngamnye.
Sebenzisa yonke inkqubo yoku-odola ngokupheleleyo ukusuka kuphando ukuya kulayisho lwesikhongozeli. Nika abathengi inkonzo ebanzi necacisiweyo.
Funda nzulu nge HAORUI
Hlola kwaye ukongamele yonke inkqubo yemveliso, Qinisekisa iimpahla ezizisiweyo kwimeko efanelekileyo.
I-HAORUI ineziqinisekiso ezipheleleyo kunye nenkqubo yolawulo lokuvavanya, ukusebenzisana nezibini zeziko leqela lesithathu kunye neelebhu-SGS, BV, Hohenstein, TUV, Intertek njalo njalo. nge-BSCI ekhoyo, i-SEDEX, i-ISO, i-FDA kunye ne-Oeko-tex, i-GS, i-CE, i-PEFC, izatifikethi ze-FSC, ukuqinisekiswa komgangatho yifilosofi esisiseko yeHaorui kuwo onke amashishini.